Solstices uye equinoxes: ndezvipi, hunhu uye kuda kuziva | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 24/03/2021 11:03 | Ciencia
Isu tinoziva kuti Nyika ine mafambiro akati wandei ayo ari ekutenderera nekuturikira. Apa tinoreva kuti nekuda kwekufamba uku, kune solstices uye equinoxes. Enquinox inguva yegore apo zuva rinowanikwa pamusoro pey equator, saka rakaiswa pamusoro pezenith. Izvi zvinoreva kuti masikati neusiku zvine nguva yakafanana. Izvo zvinopesana zvinoitika ne solstice.
Muchikamu chino tichaenda kukuudza zvese hunhu uye mutsauko uripo pakati pe solstices nema equinox.
1 Ndeapi solstices nemaequinox
2 Solstices uye equinoxes yezhizha uye nguva yechando
2.1 Zhizha Solstice
2.2 Solstices uye equinoxes: yechando solstice
2.3 Chitubu uye Autumn MaEquinoxes
Ndeapi solstices nemaequinox
Chekutanga pane zvese kuziva kuti solstices uye equinox ndezvipi. Enquinox ndipo panowanikwa zuva paequator uye zuva rinogara zvakafanana nehusiku. Ndokunge, vanopedza angangoita maawa gumi nemaviri. Izvi zvinoitika kaviri pagore, kutenderera Kurume 20 naGunyana 22. Izvi zvinowirirana nekutanga kwechirimo uye kudonha mune mamwe matunhu.
Kana tikakamura nyika kuita mahafu maviri, imwe inopenyerwa nezuva uye imwe yakavharika. Mune imwe tine masikati uye mune imwe husiku. Mutsara unokamura unopfuura nepakati pematanda. Izvi zvinoitika nekuti panguva yeequinox matanda ese ari maviri haana kutenderedzwa akananga kana kure nezuva. Izvo hazviwanzo kuitika nezuva rimwe chete. Ivo vane kumahombekombe kwemazuva mazhinji. Izvi zvinodaro nekuti hurefu hwemakore hahuna kufanana nguva dzose. Rangarira kuti makore mana ese kana iwe ukawedzera rimwezve zuva kune iyo kalendari nekuti igore rekukwakuka. Munguva yeinoinoxes zuva rinowanikwa pane imwe yemapoinzi maviri padanho rinosangana nzvimbo yekudenga equator neecliptic. Izvi zvinowirirana nedenderedzwa iri mundege imwechete neiyi equator. Ndokunge, fungidziro yeiyo yepasi equator inzvimbo yekudenga.
Iyo vernal equinox inoitika kana iye achingoenda kuchamhembe mundege yeecliptic uye ayambuke iyo yese yekudenga equator. Pano tinoona kuti mwaka wechirimo unotanga kuchamhembe kwenyika. Kune rimwe divi, iyo equinox yemuchadenga inoitika kana zuva richifamba kuyambuka equator yekudenga kumaodzanyemba. Icho chinoratidza kutanga kwekuwa.
Solstices zviitiko zvekuti zuva rinosvika pakakwirira kana pakadzika kwazvo mukati megore rose mudenga. Mugore muNorth Hemisphere kune ma solstices maviri. Kune rimwe divi, isu tine solstice yezhizha, uye kune rimwe divi, iyo solstice yechando. Yokutanga inoitika muna Chikumi 20-21 uye nguva yechando solstice muna Zvita 22-22. Pakati pemasikati maviri, zuva rinowanikwa pane imwe yemigwagwa miviri yekufungidzira paPasi inozivikanwa seTropic yeCancer uye Tropic yeKapricorn. Kana zuva ranyura pamusoro peTropic yeCancer ndipo panoitika nguva yezhizha uye kana iri muTropic yeCapricorn, nguva yechando inotanga.
Munguva yekutanga solstice ndipo patinowana zuva rakarebesa regore, nepo rechipiri riri iro ipfupi zuva uye husiku hwakarebesa.
Solstices uye equinoxes yezhizha uye nguva yechando
Zvinowanzofungidzirwa kuti zuva iro, rekutanga remwaka wezhizha, ndiro rinopisa. Asi haifaniri kudaro. Mhepo yepasi, nyika yatinofamba pamusoro payo uye makungwa anotora chikamu chesimba kubva kune nyeredzi yezuva nekuichengeta. Simba iri rinosunungurwa zvakare muchimiro chekupisa; zvisinei, ramba uchifunga kuti Nepo kupisa kwakasunungurwa kubva pasi nekukurumidza, mvura inotora nguva yakareba.
Munguva yezuva hombe, inova solstice yezhizha, imwe yemaviri hemispheres inogamuchira iyo yakanyanya simba kubva kuZuva regore, sezvo iri padyo nenyeredzi yamambo uye, nekudaro, mwaranzi yenyeredzi yakataurwa inosvika yakatwasuka. Asi tembiricha yemakungwa nepasi zvichiri zvishoma kana zvishoma zvinyoro, izvozvi.
Solstices uye equinoxes: yechando solstice
Planet Earth inosvika pane imwe nzira munzira yayo apo mwaranzi yezuva inorova pamusoro penyika nenzira imwecheteyo zvimwe oblique. Izvi zvinoitika nekuti Pasi rakanyanya kurerekera uye mwaranzi yezuva haigone kusvika zvakaringana. Izvi zvinokonzera maawa mashoma ezuva, kuchichiita iro rakapfupika zuva regore.
Pane zano rakaipa munharaunda muuzhinji nezve nguva yechando uye zhizha zvinoenderana nedaro kubva paNyika kusvika paZuva. Zvinonzwisisika kuti muzhizha kunopisa nekuti Nyika iri padyo neSuva uye munguva yechando inotonhora nekuti isu tsvaga kumberi. Asi zvakapesana zvachose. Kupfuura chinzvimbo chePasi maererano neZuva, chii chinokonzeresa tembiricha yepasi ndiyo mafungiro ayo mwaranzi yezuva yakarova pamusoro. Munguva yechando, pane solstice, Pasi riri padyo neSuva, asi kurereka kwayo ndiko kwakakwirira kwazvo muNorth Hemisphere. Naizvozvo, kana mwaranzi yacho yasvika pamusoro penyika yakarerekera zvakanyanya, zuva rakapfupika uye zvakare rakashomeka, saka hadziiti kudziya mhepo zvakanyanya uye rinotonhora.
Chitubu uye Autumn MaEquinoxes
Pano isu tinofanirwa kusiyanisa equinoxes maererano nenyika yenyika patiri. Kune rimwe divi, iyo yekuchamhembe hemisphere, kana iri vernal equinox tinayo iyo padanda Kuchamhembe pazuva kuchapedza mwedzi mitanhatu, uku kuSouth Pole, husiku hunogara mwedzi mitanhatu. Iniwo ndinofanira kutakura mupfungwa kuti matsutso anotangira kumaodzanyemba kwenyika.
Sezvauri kuona, solstices uye equinoxes zvinonyanya kukonzerwa nekufamba kwepasi zvine rukudzo kuzuva uye tembiricha uye mamiriro ezvakatipoteredza anoenderana nekutenderera kwezuva. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve solstices uye equinoxes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Solstices uye equinoxes